“Naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha” – Kichuu
Home“Naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha”
Aanga’oonni TPLF gameeyyii qabsoo waggoota 17 TPLF fi isa boodas mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo murteessoo akka waraanaafi tika qabatanii warra turaniidha.
Abiy si’a lammataf aanga’ootniifi waraanni TPLF harka akka kennatan gaafatanii ture.
Haata’u malee, pirezidantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa’el AFP waliin haasaa godhaniin ”nuti namoota qajeelfamaan bulu, naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha” jedhan.
Loltuu hedduu kan qabu eenyu? Uummatni Tigraay eenyuun deeggara?
Ol aantummaan seeraa Tigraayitti godhamaa niru naannolee biraattis fudhatamuu qaba, fknf rakkoon gullisootti tahe waan dubbatamee qofa darbamu miti” humnaanis tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba.
Obbo Leencoo Lataatu OBN irratti dubbate! Jaarsa cubbuutiin jiraatee cubbuu irratti du’uu fedhu.
Hoggansi Olaanaan waraanaa fi siyaasaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) teessoo isaa Maqalee irraa bakka birootti jijjiiruuf murteesse. Murtii kana boodas wiirtuu ajajaa (Central Command Post) bakka yeroof hin beekamnetti hundeessee jira. Kanuma waliin TV Dimtsa Wayyaanee dabalatee waajjiraleen gurguddoon iddoo haaraa kanatti jijjiiramuu FSM odeeffannoo qabatamaan bahe ni mirkaneessa. Haalli kun waraana naannichatti taasifaamaa jiru dheeressee caalattuu gaaga’ama hamaa uumuu mala yaaddoo jedhu uumeera.FSM irraa
Bilxiginnaan Hayyoota Hafan Kanaas Hidhaaf barbaadaa jirti. Waan Nafxanyaan gaafatte mara guutamaa jira. Kan Nama Aja’ibu oso dilana arginu cal jechuu keenya…
Qophii Raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa Sadaasa 28, 2020